Germany: Ibsa Ejjennoo tokko -laman - Ayyaantuu News
Germany: Ibsa Ejjennoo tokko -laman Caamsaa 8, 2012
Miseensotii Tokkuma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii(TBOJ) fi ,Oromoo Munshinii fi naannoo isaa jiraatan Caamsa 5 bara 2012 magaalaa Munshinitti waliiti dhufanii jaallan qabsaawota Oromoo otuu koloneffataa Itiyoophiyaa falmanuu yeroo gara bakkaa fi haala gara garaa jalatti lubbuu isaanii jijjiira hinqabne dabarsanii kennan yaadatanii oolanii jiru. Akkuma beekamuu guyyaan gootota Oromoo kan kabajamuu Ebla 15 yoo ta’uu haala jireenyaa biyyaa ambaa irraa kan ka’ee Oromoonni bakka jiranitti guyyaa fi haala isaaniif mijayyeetti kan yaadatan ta’uun isaa ni beekama. Dhuma yaadannoo kanarratti miseensotii TBOJ fi Oromooti bakka kanatti argaman ibsaa eejjannoo armaa gadii kana baasuun xumuranii jiru.
I. Qabsaawonni fi jaarmiyooti bilisummaa Oromoof qabsa’aan garaa-garummaa isaan gidduu furun yaada ana malee dhaabni Oromoo kan biraan jiraachuu hin qabu jedhurra ol-guddatuun akka wal_hubannoon bilisummaa Oromotiif qabsaa’an fi xiyyeeffannaa isaanis kara diinatti godhan waamicha goona.
II. Gurgurtaa lafa Oromoo fi ummattoota cunqurfamoo biraa impaayera Itophiyaa keessatti argamanii irratti motummaan Wayyaanee adeemsisaa jiru jabeesinee mormina.
III. Eenyummaa Oromoo jijjiruuf(demographic change) akeekkate qubsumma seeraan alaa ummatoota amma mootummaan TPLFn geggeefamu ni mormina.
IV. Nageenya ollaan wajin jiraachuu sabootaa jeequun umurii isaa dheerraffatuu kan barbaadu mootummaan Wayyaanee ummatoota bara dheeraa nagaa waliin jiraatan walitti buusuun lubuu hedduu fi qabeenyaa hedduu dhabamsiisaa turee jira. Ammas gochaan akkasii kun naannoo baha Wallagaa keessatti ummata Oromoo fi Gumuz giduutti deemaa jira. Gochaa akkasii kana cimsinee dura dhaabbanna.
V. Mootummaan Wayyaanee yeroo hedduu bakka tokko ykn saba tokko oggaa rukutuu barbaaddu dursee sababa sobaa qindeesee midiyaa isaatti dabarsa.Itti aansee akka waan ragaa qabatamaa argatee godhee tarkanfii shororkessummaa hojjataa. Haaluma kanaan baatii darbe keessa mataan mootummaa Itophiyaa Mallas Zenawii naanoo Oromiyaa Baaleeti fi Arsii kessa maadhee Alqaayidaa arganne jechuun dursee sababa kijibaa uummee dubbgatuun isaan ni yaadatama. Sababii kijibaa kanarratti hunda’auudhaan ummata nagaa n Masjiidatti Rabbi kadhatee galuu rasasa itti banee ajjessuu isaa jabessinee balaaleffana. Mucaa waggaa 6 dabalatee Oromoota mootummaa shororkessa kana dhumaniifis gaddee nutti dhaga’amee ibsinaa
VI. Guyyaa gootota yeroo kabajjinu kana hoganootin ABO bakka adda addatti wal hiranii jiranii fi dhugumaan qabsoo bilisummaa Oromootti amanan, rakkoo isaanii gidduu jiru gad ta’anii furuun uummata Oromoo afaan faajjii kessa baasanii akka isaanii dinarratti xiyyeeffatan maqaa gootota wareegamanitiin gaafannaa.
VII. Jarmiyooti uummata( civic groups) kan akka Hawaasoota Oromoo, jaarmiyaa hayyootaa fi kkf fakkataan, murnotaa fi dhaaboota siyaasaatti of-hidhuu dhiisanii dhimma Oromoo irratti bilisa ta’anii akka hojjataan yaadachiisaa, rakkoo qabsoo Oromoo kana kessatti qaama bilisaa ta’aanii dhaaboota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa barbaachisu akka godhanii waamicha goona.
Qabsawwan ni kufa !!
Qabsoon itti fuffa!!
Caamsa 5 bara 2012
—Gabaasaa Walgayii Gootota Oromoo Mushiin (barnoota dhihaate guututti)
7 comments - What do you think? Posted by admin - 08/05/2012 at 5:14 am Categories:
7 Responses to “Germany: Ibsa Ejjennoo tokko -laman”
Obsaa says:	08/05/2012 at 5:42 am	Baay’ee nama gammachiisa. Namoonni hagas baay’atan dhimma kanaaf walittiqabamuun oromoon hammam hawwii bilisummaa akka qabu mul’isa.
kummaa baqqalaa says:	08/05/2012 at 1:03 pm	bayee galtomaa bay’ee esentii hin gamanaa ya elii manii oromo ot akka sii walii hin beremaa nee eyutuu nutee kosaa
Hubataa says:	08/05/2012 at 5:01 pm	Wow! kun waan raajii dha. yeroo ammaa kanattihawaasni hangana ga’u walitti dhufee waan sabaa waliin mar’achuu danda’uun isaas guddaa nama jajjabeessa. Jabaadha warra Garman
Dhugaa Dhugi says:	08/05/2012 at 11:18 pm	Abdiin hegeree nutti qabnu hagaam guddaa akka ta’e natti mul’ata. Erga haa ta’u malee Waayyaannen aangoorratti ol baatee kaasee, jabeenni waanjoon gabrummaa dachaan nurratti dabale jira. Waggoottan 20 darban kana keessaa Ibsa ejjennoo hagana hin jedhamne baasnee jirraa, Gaaffii guddaa off irraa kaasee Jaarmiyaa OROMIYAA WALABA, OROMOO BILISOOME ijaaruuf qsbsaa’uf, yoom IBSA EEJJENNOO irraa garaa IBSA TARKANFNOOTTI ceena laata? Yoom guuyyaansaa?
Malkaa Milkii says:	09/05/2012 at 4:38 pm	Barootan dheeraf Jarman biyya Fira qabsoo oromoo fi Umman oromoo bayinaan qubatu ta’un isaa bekkamadhaa. haa ta’u malee egaa wagootan darbaan kurnan as uuman oromoo waliiti yaa’e bifa kanaa walgahii irrati argamun inn kun kan jalqabaa naatti fakataa waaqayoo isiin irratti haa irranfatu jabadhaa
H.B says:	11/05/2012 at 9:43 am	Warraqsi saba kamiyyu kan jalqabu dura humna barate keessaa namoota sabaafi biyya isaaniif hadoodaniin ta’ee,sutumasuutaan bu’aa ba’ii fi gufuulee jiran irra aanee, saba baldhaa damqsee ammatee gara injiffannoof milkiitti ce’a!!!Akkuma kana kan keenya illee kaleessas beektota oromoof gootota oromoo saba isaniif of kennaniin jalqabame!!
borus abdii guddaa qabnaa,jabaadhaa baratoonniif dargaggonni oromoo isintuu abdii egeree saba keessaniiti!!
Jajjabina waligaltee sabummaa fi milkii gaarii isiniif hawwa!!
mazgabuu says:	18/05/2012 at 11:46 am	Baayee gaarii , kan nama gamachiisulee dhaa !!!! Guuyaan Gootota Gotoonii uummata oromoo bilisoomsuuf luubuu offii dabarsanii keenanii . Nuuttiis duukaa butoota isaanii taneee qaabsoo kana galmaan ga’uudhaaf haangaa lubuu kengaa darbuuttii ittii fuufaa ….
Tokkumma fi injiifanoo uummata oroomottiif!!!